Ngaphambi kokuba uqale ukuqonda izibalo, kufuneka uqonde intsingiselo, imodeli kunye nemodi. Ngaphandle kwezi ndlela ezintathu zokubala, akunakwenzeka ukutolika ezininzi zeenkcukacha esizisebenzisa kwimpilo yemihla ngemihla. Ngasinye isetyenziswe ukufumana i-middlepoint yamanani kwiqela leenombolo, kodwa bonke benza ngendlela eyahlukileyo.
Xa abantu bethetha malunga nemilinganiselo yamanani, ba bhekisa kwintetho. Ukubala ithetha, vele ukongeza zonke iinombolo zakho kunye.
Emva koko, ukwahlula isamba ngamanani amaninzi owongezelelweyo. Isiphumo sakho sithetha okanye amanqaku aphakathi.
Ngokomzekelo, masithi unamanani amane okuvavanya: 15, 18, 22, no-20. Ukufumana umyinge, uza kuqala udibanise onke amanqaku amane kunye, uze uhlule i-sum by four. Esi siphumo sithetha ukuba ngu-18.75. Kubhaliwe, kubonakala into enje:
Ukuba ufanele ujikeleze kwinani elipheleleyo elisondeleyo, umyinge uya kuba ngu-19.
Umlingani lixabiso eliphakathi phakathi kwiseti yedatha. Ukubala, faka zonke iinombolo zakho ngokunyuka kwindlela. Ukuba unenombolo engapheliyo yeenombolo, isinyathelo esilandelayo kukufumana inombolo ephakathi kwoluhlu lwakho. Kulo mzekelo, inani eliphakathi okanye eliphakathi li-15:
Ukuba unenani lamanani eenkcukacha, ukubala i-median kudinga elinye inyathelo okanye ezimbini. Okokuqala, fumana ezi zimbini eziphakathi phakathi kohlu lwakho. Bangeze kunye, kwaye bahlule ngamabini.
Isiphumo siyinombolo ephakathi. Kulo mzekelo, amanani amabini aphakathi a-8 no-12:
Kubhalwe phantsi, ukubalwa kwakubukeka ngathi:
Kulo mzekelo, umlambo u-10.
Kwizibalo, imo kwisahlu yamanani ibhekisela kwii-integers ezenzeka rhoqo.
Ngokungafani nomlambo kwaye uthetha, imo imalunga nobukhulu bokuba kwenzeka. Kukho imodi engaphezulu kweyodwa okanye akukho mmo kukho konke; konke kuxhomekeke kwisethi yedatha ngokwayo. Ngokomzekelo, masithi unoluhlu lwamanani alandelayo:
Kule meko, imodi i-15 kuba iyona eninzi inokubonakala ibonakala rhoqo. Nangona kunjalo, ukuba kukho omnye umncinci kwi-uluhlu lwakho, ngoko uya kuba neendlela ezine: 3, 15, 17, no-44.
Ezinye zeStatistical Elements
Ngezinye iinkcukacha kwiimanani, uya kuphinda ucelwe ukuba uluhlu kwiqela leenombolo. Uluhlu nje kuphela kwinani elincinci elikhutshwe ukusuka kwinani elikhulu kwinani lakho. Ngokomzekelo, masisebenzise amanani alandelayo:
Ukubala uluhlu, unokukhupha u-3 ukusuka kwi-44, ukunika uluhlu lwe-41. Ukubhalwa ngaphandle, i-equation ibonakala kanje:
Emva kokuba ufumene ubunzulu besiseko, umxube kunye nemodeli, ungaqala ukufunda ngeengcamango ezingaphezulu. Isinyathelo esilandelayo sifunda ukuba kungenzeka , ithuba lokuba kwenzeka isiganeko.
Yiyiphi ixabiso elingenamsebenzi?
Iintlobo ezi-5 eziphambili ze-OCR
20 Ulwazi lokuzonwabisa nge Pokemon: I-Movie yokuqala
Iimfuneko ukuba usebenzise i-USA kunye ne-visa
UGomasai - Iimpawu ezilula zaseJapane
Biography yeLizzie Borden
Adickinson College Admissions
'IziKhupha zeKhaya zodwa
Ababhali bamaPagan omele Uwazi
Iingqungquthela: Amazwi Aphikisayo